किन हुन्छ न्यून रक्तचाप, यस्ता छन् असर र बच्ने उपाय – Everest Dainik – News from Nepal
रक्तवाहिनी नलीमा रक्तप्रवाह हुँदा नशाको भित्तामा पर्ने दवाब लाई रक्तचाप भनिन्छ । एउटा वयस्क र स्वस्थ्य व्यक्तिको शरीरमा यसको मापन गर्दा माथिल्लो अंक १२०/१२५ र तल्लो अंक ७५/८० देखिन्छ । माथिल्लोलाई सिस्टोलिक र तल्लोलाई डायस्टोलिक रक्तचाप भनिन्छ । यसलाई पारो (मर्करी)सँग तुलना गरेर मिलीमिटरमा नापिन्छ । मुटु खुम्चँदा रगत मुटुबाट बाहिर हुत्तिन्छ र त्यो बेला नशाको भित्तामा बढी दवाव पर्दछ जसलाई सिस्टोलिक भनिन्छ र मुटु फुक्दा रगत मुटु भित्र तानिन्छ र त्यो बेला नशाको भित्तामा सबैभन्दा कम दवाब पर्दछ, जसलाई डायस्टोलिक भनिन्छ ।
रक्तचाप लेख्दा शुरुमा सिस्टोलिक र पछि डायस्टोलिक लेखिन्छ । दुई रक्तचापका बीचमा छड्के धर्सोले छुट्ट्याइन्छ । यही हिसाबले सामान्य रक्तचाप लाई १२०/८० भनिएको हो । यदि रक्तचाप निरन्तर रूप मा १२०/८० भन्दा कम अर्थात् ९०/६० वा त्यो भन्दा कम भयो भने तेसलाई न्यून रक्तचापको समस्या का रूपमा हेरिन्छ । लामो समय देखि बिस्तारै कम हुँदै गएको भन्दा एक्कासि तल झरेको अवस्था चिन्तनीय हो ।
न्यून रक्तचापको निदान
न्यून रक्तचाप भएको हो वा होइन भन्ने जान्नका लागि विभिन्न पोजिशनमा बिरामीको रक्तचाप नापेर हेरिन्छ । रक्तचाप नाप्नेका लागि स्फिग्मोम्यानोमिटरको प्रयोग नै सबैभन्दा भरपर्दो मानिएको छ । यदि बिरामीमा न्यून रक्तचापका लक्षणहरु देखिएका छन् र उसको रक्तचाप मापन गर्दा पनि ९०/६० वा त्यो भन्दा कम देखियो भने ऊ न्यून रक्तचापको शिकार भएको स्पष्ट हुन्छ । तेसपछि रक्तचाप किन कम भयो भन्ने जान्नका लागि निम्न परीक्षण गर्नु पर्दछ –
रगतमा हेमोग्लोबिन, सोडियम तथा पोटाशियमको मात्रा ।
शरीरमा रगत को मात्रा को जाँच ।
मुटु तथा फोक्सोको जाँच । मुटुको भल्भमा खराबी आउनाले पनि रक्तचाप अनियन्त्रित हुन सक्छ ।
रक्तचाप न्यून भएको पाइयो भने तत्कालै अपनाउनु पर्ने केही सावधानीहरु एसप्रकार छन् –
तुरुन्तै बस्ने वा सुत्ने ।
मुट्ठी कस्ने र फुकाउने तथा खुट्टा हल्लाउने जस्ता शरीर लाई क्रियाशील बनाउने व्यायाम गर्ने ।
नून चिनीपानी वा कालो चिया पिउने ।
पिसाब लगाउने औषधिको सेवन ले पनि रक्तचाप घट्ने हुँदा त्यो पनि बन्द गर्ने ।
यदि उच्च रक्तचापको सेवन गरिरहेको भए सो बन्द गर्ने ।
न्यून रक्तचापको उपचार गर्दा मुख्यतः न्यून रक्तचाप हुनुको कारण पत्ता लगाएर उपचार गर्ने प्रयास गरिन्छ । द्वितीय उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्नको लागि यसका कारण पत्ता लगाएर आवश्यक उपचार विधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ । प्राथमिक उच्च रक्तचाप भएकाले जीवनशैली परिर्वतन गर्ने तथा मुटुरोग विशेषज्ञको परामर्शमा रक्तचाप नियन्त्रक औषधि खानुपर्ने हुन्छ । जीवन शैली परिवर्तन नगरी औषधि मात्र लिँदा पनि रक्तचापलाई दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन ।
शरीरमा पानीमात्रा कम हुन नदिन रग मा सोडियम, पोटाशियम, क्याल्सियम जस्ता पानी रोकेर राख्न सक्ने गुण भएका तत्त्वहरु बढाउने कुरा सेवन गराउने ।
विभिन्न किसिमका शारीरिक व्यायामहरु गर्ने ।
खानेकुरामा नूनको मात्रा बढाउने ।
एकैचोटि धेरै खानु भन्दा थोरै थोरै तर धेरै पटक खाने बानी बसाल्ने ।
रक्तचाप बढाउने खालका औषधिहरुको सेवन गराउने ।
धूमपान तथा मद्यपान त्याग्न लगाउने ।
उच्च रक्तचापबाट बच्नका लागि भोजन व्यवस्थापनको ठूलो महìव छ । भोजनको मात्रा भोज्य पदार्थको छनोट व्यक्तिको प्रकृति, विकृति (रोग), बल, वय (उमेर), सत्व (मानसिकता) आदिको आधारमा हुन अति आवश्यक छ ।
१. उच्च रक्तचाप भएकाले नुन तथा सोडियमयुक्त खाद्य पदार्थको पहरेज गर्नुपर्छ । दैनिक दुई ग्राम भन्दा ज्यादा नुन नखाने ।
२. रक्सी तथा अन्य अल्कोहोलिक पेय पदार्थको सेवन गर्नुहँुदैन ।
३. घिउ, नौनी, छाली, वटर र बोसो जस्ता जङ्गम स्रोतबाट पाइने चिल्लो पदार्थको सेवन गर्नु हुँदैन । सकेमा तेल रहित पाककला सिकेर तेल रहित खानेकुरा खाँदा राम्रो ।
४. उच्च रक्तचाप भएकाले पूर्ण शाकाहारी हुन जरुरी छ ।
५. नदेखिने चिल्लो पदार्थका स्रोतहरू बदाम, काजु, मुङ्फली, नरिवल जस्ता तौलीय फल खानु हँुदैन ।
६. तौल ज्यादा भएकाले कम क्यालोरी भएका खाना खानु पर्दछ ।
७. पेटभरी ठुसी–ठुसी खाने बानी त्यागेर पेटको आधाभाग ठोस र चौथाइ भाग तरल पदार्थले भर्नु पर्छ भने चौथाइ भाग वायु संचरणका लागि खाली छोडिदिनु पर्छ ।
८. अजिनोमोटो, सोडियम वाइकार्बोनाइड र सोडियमबेन्जोएट जस्ता बेकिङ पाउडरको प्रयोग मुटु तथा रक्तचाप मैत्री होइन ।
९. खानामा रेसा र चोकरयुक्त खाद्यान्नको समायोजन हुन जरुरी छ । मदिरा सेवन गर्ने वानी छ भने त्यसलाई आजैबाट हटाउनु पर्छ । मदिरा पिउदा रक्तचाप बढ्छ भन्ने धारणा पनि पाइन्छ । हरेक १० ग्राम रक्सि पिउदा तपाईको प्रेस १ एमएमएचजीले बृद्धि हुन्छ । तर न्यून रक्तचाप छ भन्दैमा मदिरा पिउने वानी भने बसाल्नु हुँदैन । अत्यधिक अल्कोहलको मात्राले डिहाइडे«सन ल्याउछ र झन् रक्तचापको मात्रा घट्छ । प्रर्याप्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ । यसो गर्नालेउ रक्त प्रबाह सशक्त र तीब्र हुन्छ । शरीरमा पानीको मात्रा बढी भएमा पनि न्यून रक्तचापबाट थोरै मात्रामा भएमा जोगिन सकिन्छ ।
ट्याग्स: Hypotension, low blood pressure